Sandals uye Beaches Resorts Win 13 New Diving Magazine Awards
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Sandals uye Beaches Resorts Win 13 New Diving Magazine Awards
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Mutsvene Lucia Breaking News • Sports • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Sandals uye Mahombekombe anohwina hombe muDhivha mibairo
Sandals Resorts uye Beaches Resorts inoenderera mberi kuseta chiyero chepamusoro kune ese-anosanganisirwa dive maresitorendi muCaribbean.
Vakazivisa ma accolades avo achangoburwa kubva Scuba Diving Magazini 2022 Vaverengi Sarudzo Mipiro kuCaribbean.
Gore negore, Scuba Diving Vaverengi veMagazini vanoongorora nzvimbo dzekutandarira pasirese uye vanofunga zvakasiyana siyana.
Aya mapoka anotangira pamhando yemakamuri nemaresitorendi kusvika kumhando yevashandi, zvakanakisa zvemhuri zvine hushamwari, nezvimwe.
Huwandu hwegumi nematatu mibairo yakahwinwa neiyo Luxury Included® brand:
#1- Zvakanakisa Zvemhuri-Zvine Hushamwari Zviitiko- Mahombekombe ekuhodha
#1 - Hunhu hweMakamuri- Sandals Grande St. Lucian
#2 - Hunhu hweMakamuri- Sandals Grenada Resort uye Spa
#2 - Hunhu hweRestaurant- Sandals Grande St. Lucian
#3 - Hunhu hweResort- Sandals Grande St. Lucian
#3 - Hunhu hweRestaurant- Sandals Grenada Resort uye Spa
#5 - Hunhu hweResort -Sandals Grenada Resort uye Spa
#10 - Hunhu hweMakamuri- Sandals Negril
#10 - Hunhu hweVashandi- Sandals Grande St. Lucian
#10 - Hunhu hweMakamuri- Sandals Montego Bay
#15– Yakanyanya Kupfuura- Masandals Grande St. Lucian
#15 - Hunhu hweResort- Sandals Ochi Beach Resort
Kubva pakatanga kudyidzana kwavo muna 1997, PADI® yakaisa Sandals Resorts uye Beaches Resorts seimwe yePamusoro 5 Dive Operations muWestern Hemisphere. Iyo Luxury Included® resort kambani inopa nyanzvi PADI® certification uye kudzidziswa kune vashanyi vanogara pa-resort uye yakapa ingangoita 140,000 PADI certification kusvika-zvino. Zvitupa zvinowanikwa panzvimbo yekutandarira kubva kuPADI Open-Water certification kusvika kuPADI IDC Staff Instructor certification uye zvisingaverengeke makosi ehunyanzvi pakati. Kusanganisira iyo Lionfish Hunter PADI yakakosha kosi, uko vashanyi venzvimbo dzakasarudzwa vanodzidza kuvhima nemazvo mhuka dzeCaribbean dzinopinda uye kubika hove dzavo.
Paunenge uchigara pane chero nzvimbo dzekambani yekutandarira muCaribbean, vanhu vakasiyana-siyana vanogona kunyura zuva nezuva uye kutakurwa kubva pamatanho emasutu avo kuenda kunzvimbo dzekunze dzinozvirumbidza nematombo ane mavara, kuparara kwechikepe, kudonha, uye mhando dzemhando dzepasi pemvura. Iine Sandals Resorts uye Beaches Resorts 'Aquacenters inopa top-of-the-line midziyo nezvese kubva kuScuba Pro® regulators uye BCD's, masks, snorkels, Deep Blue Fins® uye matangi kune mamiriro-e-the-art, mapatya diesel Newton mabhoti, vakasiyana-siyana vanogona kunakidzwa zvisingaenzaniswi nezvakaitika pasi pemvura, zvose zvinosanganiswa. Kuwedzera pamusoro pechirongwa chekudhibha, vashanyi vachakurumidza kuongorora mvura ine mukurumbira pasi rose yeCuraçao paSandals Resorts 'itsva yekudhivha kwainoenda, Sandals Royal Curaçao, kutanga muna Kubvumbi 2022.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro nzvimbo dzekutandarira dzinohwina mibairo kana kubhukidza kugara kwako kunotevera, ndapota shanya: sandals.com uye beaches.com.